Tue, Jul 14, 2020 at 4:07am
काठमाडौँ, ६ माघ जाडोको मौसममा पनि मानिसलाई विभिन्न रोगले संक्रमण गर्न सक्छ । जाडोयाममा बिहान बेलुका वायुमण्डलको तल्लो तहमा ब्याक्टेरिया, भाइरसलगायत जीवाणु बढी क्रियाशिल हुन्छन् । साथै धूलोका कण पनि वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुन्छ । यस्तो बेला माक्स नलगाई घरबाट निस्किए श्वासप्रश्वास, छाला, कोल्ड डाइरिया, खोकी जस्ता रोगले सताउछ । यो मौसमले बिशेषगरि बालबालिकालाई अझै बढी समस्या पार्छ । भाइरसले बालबालिकालाई..
आईतवार, माघ ५, २०७६ साल
काठमाडौं, ५ माघ हाम्रो करेसाबारीमा पाइने करेला निकै फाइदाजनक तरकारी हो । खाँदा तितो भएपनि करेलाको स्वाद निकै मिठो हुन्छ । करेला तितो हुनाले धेरैलाई मननपर्न सक्छ । तर तितो करेलाले हाम्रो शरिरमा लाग्ने बिभिन्न रोगहरुबाट बचाउछ । करेलालाई महत्त्वपूर्ण औषधिको रुपमा पनि मानिन्छ । करेलाको सेबनले दमको समस्या समाधान गर्छ । दमको समस्या भएकाहरुले करेलाको तरकारीमा मसला नहाली खानु राम्रो हुन्छ..
काठमाडौँ, ५ माघ उमेर बढेसँगै शरीरमा विभिन्न समस्या पैदा हुनेगर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने समयमै रोगको पहिचान हुनसक्छ । समयमै गरिएको उपचारले समस्या सुरुकै चरणमा रोगको उपचार हुन्छ । अतः हामीले हरेक वर्ष यी विविध आयामबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ : रक्तचाप यदी रक्तचाप १२०/८० देखि १३९/८९ मा छ भने वर्षमा एक पटक रक्तचापको जाँच गराउनु उपर्युक्त हुन्छ । तर रक्तचाप १४०/९०..
बिहिवार, माघ २, २०७६ साल
काठमाडौँ, २ माघ तत्काल कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया नदेखिने भएकाले कलेजोमा बोसो जमेको कुरा धेरैले भेउ नै पाउँदैनन् । तर शारीरिक परीक्षण गर्ने हो भने धेरैले थाहा पाउँछन्, आफ्नो कलेजोमा बासो जमेको । हुन त कलेजोमा सामन्य बोसो लाग्नु ठूलो कुरा होइन । तर, बोसोको मात्रा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । कलेजो हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । तर, बद्लिदो..
काठमाडौँ, २ माघ नेपाली समाजमा फलफूलका बारेमा केही भ्रमहरू छन् – फलफूल खानेवित्तिकै चिसो लाग्छ । अवश्य पनि चिसोकै कारण न्यूमोनिया लगायतका चिसोजन्य रोग लागेका बिरामी छन् भने तिनलाई चिसो फलफूललाई तातोपानीमा भिजाएर खान सल्लाह दिइन्छ । तर फलफूलमा हुने भिटामिन चिसोजन्य रोगहरूका अत्यावश्यक हुने हुनाले चिसो लाग्छ भनेर फलफूल नखानु चाहीं मुर्खता नै हुन्छ । गर्मी याममा जसरी शरीरमा पानी कम हुने..
काठमाडौँ, २९ पुस नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आज चिनियाँ मेडिकल सहयोगको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी दिनमा अस्पतालको स्तरोन्नति र विकासमा सहयोग गर्न चीन दृढ रहेको बताउनुभयो । चीन सरकारले अस्पताल बनाउन सहयोग गरेको र त्यसपछि निरन्तर सहयोग गर्न पाएकामा खुशी..
काठमाडौँ, २९ पुस मुटुको अधिक कार्यको कारण रगत बग्ने धमनीहरुमा धेरै तनावका कारण चाप बढ्नु नै उच्च रक्तचाप हो । सामान्य रुपमा मानिसको रक्तचाप १२०/८० मीसी एच जी हुने गर्दछ । तर १४०/ ९० मीमी एचजी वा सो भन्दा धेरै भएमा उच्च रक्तचाप मानिन्छ । यदि १ हप्ता भन्दा बढी वा सो भन्दा बढी नियमित रुपमा १४०/९० मीमीएचसी भन्दा बढी भएमा उच्च..
दमौली, २८ पुस गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दमौली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अस्पतालको स्तरोन्नतिको गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने बताउनुभयो । अस्पतालको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्काल प्राविधिक टोली पठाउने र आफूले पनि स्थलगतरुपमै अध्ययन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्राविधिकको प्रतिवेदनपछि थप आवश्यक..
चिप्लेढुङ्गा, २७ पुस यहाँ स्वदेशी चियाको प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ । जैविक चियामा भिटामिन सी, इ र बी टु पाइने तथा ग्रीन टीमा फोलिक एसिड, बिटा व्यारोटिन क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, जिङ्क कपर, एन्टी अक्सिडेन्ट आदि तत्व पाइने र यसको प्रयोगबाट शरीरमा स्फूर्तिका साथै स्मरण शक्ति विकास हुने बताइएको छ । पोखरामा आज जैविक चियाको महत्व र यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारेमा..
काठमाडौँ, २७ पुस हामीले दैनिक खाने खानाले हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यद्यपि केवल एउटै परिधिमा मात्रै स्वस्थ जीवन अडिएको भने हुँदैन । किनकी हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वातावरणीय तत्व, वंशाणुगत तत्व तथा आचरण र मानसिक अवस्थाका भागहरुले पनि उतिकै भूमिका निर्वाह गर्दछन् । केही आधारभूत नियमहरुलाई यदि हामीले बानीको रुपमा विकास गर्न सक्छौँ भने हाम्रो स्वस्थ जीवन बाँच्ने सपना..
काठमाडौँ, २५ पुस वातावरणमा हुने प्रदुषणका कारण श्वासप्रश्वासजन्य समस्याबाट शहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू बढी पीडित भइरहेका छन् । यसर्थ, ग्रामीण भेगमा बस्नेलाई पनि समस्या नभएको भने होइन । वातावरणीय प्रदुषणका कारण शरीरका जुनसुकै अंगमा एलर्जी हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसमा पनि नाकको एलर्जी बढी देखिहरेको छ । वातावरणलाई शरीरले सहजै स्वीकार गर्न नसक्नु वा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली संवेदनशील भएर वातावरणसँग घुलमिल..
काठमाडौँ, २४ पुस तपाईंलाई लाग्दो हाे, नुहाउने तरिका पनि गलत र सही हुन्छ ? जसले जसरी नुहाउँदा पनि के फरक पर्छ ? यदि यस्तो यो भने तपाईंको सोचाइ गलत हो । खानपिन र सुत्ने विशेष तरिकाजस्तै नुहाउने पनि एउटा सही तरिका हुन्छ । यदि तपाईंले यो तरिका अपनाउनु भएन भने प्यारालाइसिस अथवा ब्रेन स्ट्रोकको खतरा हुन्छ । त्यसैले कसरी नुहाउने भन्ने कुरा..
काठमाडौँ, २३ पुस चिसो सिजनमा विभिन्न रोगहरुले सताउने गर्छ । सामान्य केहि खानेकुरामा ध्यान दिन सक्यो भने जाडो सिजनका लागि हितकर मानिन्छ । अदुवा अदुवाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको साथै शरिरलाई हिट पनि प्रदान गर्छन । जाडो सिजनमा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने गर्छ । जसले गर्दा कब्जियतको समस्याले समेत सताउन सक्छ अदुवाको सेवनले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउँछ । जाडो मौसममा भोजनमा अदुवाको..
दमौली, २२ पुस तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित बन्दीपुर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा शुरु भएको छ । आवश्यक उपकरण प्राप्त भएपछि अस्पतालले शल्यक्रिया सेवा शुरु गरेको हो । शल्यक्रिया सेवाका लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटले उपकरण उपलब्ध गराएको थियो । शल्यक्रिया सेवाको सोमबार शुभारम्भ गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं अस्पताल कार्य सञ्चालन समितिका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले यस भेगका जनताले सहज र सरल सेवा पाउने..
काठमाडाैं, २१ पुस पुरुषमा भन्दा शौन्दर्यको हिसावले महिलाहरुमा नङको बढि महत्व हुन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरुले नङमा विभिन्न किसिमका पालिस लगाएर यसलाई आकर्षक बनाउने गरिरहेका हुन्छन । नङले हाम्रो औँलाको शोभा बढाउनुको साथसाथै अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गरिरहेको हुन्छ । नङले हामीलाई हाम्रो शरीरमा विकास भइरहेको रोग तथा शारीरिक समस्याको संकेत दिइरहेको हुन्छ । आफ्नो नङको रंग र आकारअनुसार रोग पत्ता लगाउन..
काठमाडौं, २० पुस चिनी हामीले धेरै प्रयोग गर्ने चिजमध्ये एक हो । हामी यसलाई गुलियोपनको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौं । कमै मानिसलाई थाहा होला कि, चिनीको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका रोगहरू निम्तिने गर्छन् । एउटा अध्ययनले चिनी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक हुने देखाएको छ । चिनीले पुर्याउने असरहरू चिनीको बढी सेवन गरियो भने क्यान्सरको सम्भावना बढन सक्छ । अधिक चिनीको मात्रा क्यान्सरको..
शुक्रबार, पौष १८, २०७६ साल
काठमाडौं, १८ पुस जाडोका बेला मानिसलाई ‘हाइपोथर्मिया’ जस्तो समस्याले सताउने गर्छ । हापोथर्मिया हुँदा शरीरको तापक्रम घड्दै जान्छ । मानिसको सामान्य तापक्रम ९८ दशमलब ४ डिग्री फरेनहाइड हुन्छ, त्यो तापक्रम छिटोछिटो घट्दै गएको खण्डमा हाइपोथर्मिया हुन्छ । तापक्रम ९५ डिग्री फरेनहाइड तिर झ¥यो भने हाइपोथर्मिया हुने सम्वाभना हुन्छ । शितलहरका बेलामा यो समस्या मानिसमा मात्र होइन जनावरमा पनि देखिनेगर्छ । जाडो बेलामा शरीरले..
बिहिवार, पौष १७, २०७६ साल
काठमाडौँ, १७ पुस सरकारले सप्ताहव्यापी रुपमा पाँचौँ योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथ प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय योग दिवस तयारी मुल समारोह समितिको बैठकले आगामी माघ १ गतेदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक माघ १ गतेलाई योग दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । शिक्षासचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा योग दिवस कार्यक्रम..
काठमाडौँ, १७ पुस मुखभित्र कहिले काहीँ साना बिबिरा, मसिना सेता खालका फोकाफोकीआएर सताउने गरेको पाइन्छ ।यी घाउले खाना खान अप्ठ्यारो पार्नुका साथ साथै बोल्नै नहुनेगरी दुःख पनि दिन सक्छ । कहिले आफैँ वा दाँतले मुखमा भएको कुनै मासुको भागलाई तोकेर सानु र एक वा एकभन्दा बढी घाउ बन्ने गर्छ । यस्ता घाउ निको हुनुभन्दा पनि जटिल भई घाउ ठूलो, गहिरो भएर लगातार..
काठमाडौँ, १७ पुस जटिल किसिमका नसर्ने रोगीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि जनतालाई स्वास्थ्य बारे जानकारी दिने तयारी गरेको सरकारले अब नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई तीब्रता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा सबै पूर्वकार्यहरु सम्पन्न भइसकेकोले काम पनि सुरु भइसकेको जनाएको छ । दीर्घकालीन स्वरुपका रोग लागेकाहरुलाई अनुदान शीर्षकमा नै अर्ब रुपैयाँ बढिसकेपछि सरकार नागरिकहरुलाई घरदैलोमा नै गएर स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो..
बुधबार, पौष १६, २०७६ साल
लागोस, १६ पुस सन् २०२० को पहिलो दिन विश्वमा तीन लाख ९२ हजार ७८ जना शिशुको जन्म हुने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)ले बुधबार जनाएको छ । “सबैभन्दा बढी बालबालिका भारतमा जन्मिने छन् भने दोस्रो धेरै चीनमा र तेस्रो धेरै नाइजेरियामा जन्मिने छन्,” यूनिसेफको प्रक्षेपणका आधारमा नाइजेरियाका लागि यूनिसेफका प्रतिनिधि पिटर हकिन्सले बताउनुभयो । “जनवरी १ मा भारतमा ६७ हजार ३८५ शिशुको जन्म..
काठमाडौँ, १४ पुस सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारीका समयमा आवश्यकपर्ने स्यानेटरी प्याडको निःशुल्क वितरण शुरु गरेको छ । कतिपय जिल्लामा महिनावारी हुँदा छात्रा विद्यालय नआउने तथा क्रमशः कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरुको नियमितता र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सरकारले यस्तो प्रबन्ध गरेको हो । सङ्घीय सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि कार्यविधि..
काठमाडौँ, १४ पुस मौसम परिवर्तन प्राकृतिक नियम हो । जस्तोसूकै मौसममा आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु र मौसमअनुसार सचेतता अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यतिबेला चिसो मौसम छ । तराईमा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित पारिरहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा घट्दो तापक्रमले दैनिकी कष्टकर बनाइरहेको छ । जाडोमा ब्लड प्रेसर बढ्ने खतरा चिकित्सकहरुका अनुसार गर्मीको तुलनामा जाडोमा ब्लड प्रेसर अचानक बढ्छ । ब्लड प्रेसर अचानक बढ्ने..
काठमाडौँ, १३ पुस सामान्यतया खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ । ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ ढ्याउ आइरहने लगायत समस्या देखिन्छन् । ग्यास्ट्रिकको कारण पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा..
बिहिवार, पौष १०, २०७६ साल
यस्ता लक्षण देखिएका मानिसमा रक्त क्यान्सरको जोखिम उच्च काठमाडौँ, १० पुस क्यान्सर एउटा प्रकृतिको रोग हो । त्यसमा पनि नेपाली समाजमा रक्त क्यान्सर भयो भने यसको उपचार नै हुँदैन र बिरामीको तुरुन्त मृत्यु हुन्छ भन्ने सोच छ । तर समयमै रोग पहिचान भए सबै प्रकारका क्यान्सर निको हुन्छ । रगतमा रहेका आरबिसी र डब्लु बिसी कोषिकाहरू अनियन्त्रित रुपले बढ्नु नै रक्त क्यान्सर हो..
काठमाडौँ, ९ पुस सुकुमेल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले ग्यास्ट्रिकबाट रक्षा गर्छ, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सर नियन्त्रण गर्छ, मुटुसम्बन्धी समस्याबाट राहत दिन्छ र रक्तसन्चारमा सुधार गर्छ । यसका साथै यो दाँतसम्बन्धी रोग र मुत्रनली संक्रमणजस्तै सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस र गोनोरियाको उपचारका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । कहाँ पाइन्छ सुकुमेल? यो खासगरी भारत, नेपाल र भुटानको प्रमुख मसला मानिन्छ । भारत, चीन, भुटान, भियतनाम, मलेसिया,..
काठमाडौँ, ८ पुस शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले काठमाडौँमा स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लु सार्ने इन्फ्लुएन्जा ‘ए’को सङ्क्रमण देखिएको जनाएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचारका लागि पुगेका १५ वर्षीय एक किशोरमा इन्फ्लुएन्जा 'ए' भएको पुष्टि भएको अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । ती किशोरलाई स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुमध्ये एउटा भएको भए..
काठमाडौँ, ८ पुस । जाडो तथा मौसम बदलीको समयमा पिनासको समस्या बढी हुने गर्छ । पटकपटक रुघा खोकी लागिरहने व्यक्तिमा पिनास हुने बढी सम्भावना हुन्छ । पिनास एक प्रकारको संक्रमण हो । नाको छेउमा रहेको हड्डीमा पातलो झिल्ली हुने गर्छ । रुघा वा एलर्जीका कारण त्यसमा संक्रमण हुन्छ, जसलाई पिनास भएको भनिन्छ । लक्षण -पिनासको प्रारम्भिक लक्षण नाक बन्द हुने, टाउको दुख्ने र अनुहारको..
सोमबार, पौष ७, २०७६ साल
काठमाडौँ, ७ पुस धेरैजसो मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने ल्वाङमा औषधीय गुण हुन्छ । ल्वाङको सेबन गर्नु हाम्रो शरिरको लागी निकै फाइदाजनक छ । ल्वाङ धेरैजसो आयुर्वेदिक उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ । ल्वाङ हालेको खानेकुरामा पनि निकै स्वाद आउँछ । ल्वाङमा विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता हुन्छ । यसको सहि तरिकाले प्रयोग गर्न जानेमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यदि तपाइको दाँत दुखेको..
महोत्तरी, ७ पुस नेपाली सेनाद्वारा महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–३ खखनामा सञ्चालन गरिएको १० दिने निःशुल्क शल्यचिकित्सासहितको स्वास्थ्य शिविरबाट ३४ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । गत मङ्सिर २७ गतेदेखि आइतबारसम्म शिविर सञ्चालन भएको थियो । खखना माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजित शिविर समापन समारोहमा नेपाली सेनाका सहायक रथि डा देवेन्द्रबहादुर खत्रीले उपचार सेवा लिनेमा १७ हजार ९७३ महिला र १४ हजार १६४ पुरुष..
Results 1452: You are at page 12 of 49